Naasaha Weyn Haweenka Dhexda Yar Bernal 151CM TPE Dolls Sex
Caruusadaha qaabka yurubiyanka ah,Caruusadaha galmada
Bernal - Big Ass Buluuga Indhaha 151CM TPE Love Doll
Save 25% $ 1,674.89 $ 1,268.04
* Dhammaan alaabada caruusadaha galmada lagu geeyo waa lacag la’aan. Ma jiraan ajuuro qarsoon.
* Sanduuq gaar ah oo loogu talagalay kaydinta iyo daabulida caruusadaha galmada. Kuwa kale uma aqoonsan karaan inay tahay doll ka baxsan - ilaalinaysa arimahaaga gaarka ah.
* Caruusadeena dhabta ahi waxay ka samaysan yihiin silikoon caafimaad oo badbaado leh oo aan sun lahayn (TPE), taas oo ugu dhow jilicsan sida dadka dhabta ah.
* Meel kasta ayaa la dhigi karaa iyada oo ah haweeney dhab ah. Astaamo kasta oo jinsi oo dhab ah waxay leedahay qalfoof bir ah oo si buuxda u qeexan. Kuu keeni karaa raaxada galmada ugu dambaysa
* Waxaan haynaa xulashooyin badan oo xulashooyin ah oo loogu talagalay caruusadaha jacaylka oo leh cabirro iyo qaabab kala duwan.
Liiska liiska xirmooyinka Bernal:
Dhererka ： 59 inji (151cm)
Miisaan ： 69 lbs (31.5kg)
UstDayaanna ： 37 inji (95cm)
Dhexda ： 18 inji (47cm)
Miskaha ： 33 inji (83cm)
Siil ： 7.1 inji (18cm)
Futada ： 6.3 inji (16cm)
Afka: 5.1 inji (13cm)
Dhererka gacanta: 7.1 inji (18cm)
Size xirxirida: 55.2*16.6*11.9 inches(140*42*30cm)